Finxaalessummaan sabboonummaa Amaaraa naannoo ofii .. - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsFinxaalessummaan sabboonummaa Amaaraa naannoo ofii ..
Finxaalessummaan sabboonummaa Amaaraa naannoo ofii mo’achuu irra darbee, qabiyyee, amalaa fi humna sabboontummaa Oromoo akkaataa ofii barbaadutti bocuuf dhufee ulaa Oromoo irra ga’eera. Isa kana abbaatu quba irraa muree, bulchiinsa Shiimallis waliin bakka isheen dhuftetti deebisa. Dhageesseetta Oromo.
Ethiopia: ሊታይ የሚገባው ቪዲዮ – አዲሱ አረጋ የተስፋዬ ገብረአብን ሴራ አጋለጡ
Wanni Addisuu Araggaa dubbate kan isaa qofa natti hinfakkaatu. Paartiin isaa OPDOnis waan jedhame kanatti amana jechuu dha. Tahuu baannaan paartiin sun Addisuu ari’uutu irraa eegama. Jedhanii ka’anii lola ummataatiin dhiibamanii dhiifama gaafachuu osoo hin taane jalqabuma maal irra dhaabbatamee dubbatame kan jedhutu deebii argachuu qaba.
Waan baayyee na baasonfachiise keessaa:
– Namni baayyeen kitaaba #የቡርቃ_ዝምታ jedhamu osoo hin dubbisin xiinxala kenna.
– Kitaabichi kan dubbatu waa’ee Harka muraa fi Harma muraa aanolee miti. Harki 80- (dibbeentaan 80) kan ta’u qabsoo Shaabiyaa fi Woyyaanee irraa haasawa. Achi keessatti garuu yeroo jarri falmachaa turanitti dammaqinni sabboonummaa Oromoo sadarkaa gad-aanaa irra turuusaa agarsiisa. Maaliif yo jettan ajajoota loltoota dargii keessa hedduun isaanii Oromoota sabboonummaa hin qabne ta’uu hubattu. – Aanole maqaa ገጸ ባህሪ / character (waa-hima) tokkoo ti.
ገጸ ባህሪ Aanole jedhamu hayyuu Oromoo kan sabboonaa ta’e kan OPDOiile hin ta’in kan ABOlle hin ta’in tokko ture. Kan dhaaba lamanuu qeequ ture. Garuu dhumarratti qabsotti seenee jira.
– Hawwanii Waaqoo OPDO dha. Sanuu OPDO hubannoo hin qabne turte. (Namni baayyeen Hawwaniin Haasan Alii ti jedhee Shakka. Gariin ammoo Nagaasoo dha jedhee shakka.)
– Kitaabichi wolumaa galatti waan Oromoon fakkaatu, jireenyasaa, miidhaa isarra gahe hima. Sabboonummaan Oromoo kun heger daraaree akka laga Burqaa san mataa ol qabatee lola’uuf akka jiru raaga. Dhaloonni akka Qeerroo kun akka dhufu raagee katabe. Ilaalcha Habashaan Oromoof qabdulle tuttuqee jira.
Waan maraafuu kitaabicha dubbisaa me.
( Barreeffama seensaa kana keessatti intalti hanga of wollaaltutti rifattee of wollaalte tun Haawwanii Waaqoo -OPDO- dha.)